मेयर चौधरीको छोराको निधनमा पूर्वप्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीसम्म मलामी, हजुरबुबाले दिए दागवत्ति (तस्विरसहित)
उदयपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवोदी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पुत्रशोकमा परेका उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बलदेव चौधरीलाई घरमै पुगेर समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ । अध्यक्ष नेपालले त्रियुगा नगरपालिका ११ गाईघाटस्थित घरमै पुगेर चौधरी र परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको हो ।
शनिबार पिकनिक जाँदा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मेयर चौधरीका २८ वर्षीय छोरा मनोज चौधरीको मृत्यु भएको थियो । पुत्रशोकमा परेका पार्टीका प्रदेश १ को अध्यक्षसमेत रहनु भएका मेयर चौधरीलाई अध्यक्ष नेपालले सान्त्वना दिनुभयो । चौधरी पुत्रको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा ओढाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभयो । उहाँ त्रियुगा नदीको घाटसम्म नै मलामी पनि जानुभयो ।
हेलिकेप्टरबाट पौने १२ बजे गाईघाट उत्रनुभएका नेपालले करिब दुई घण्टा बिताएर समवेदना प्रकट गरी काठमाडौं फर्कनुभयो । समवेदना बाहेक कार्यकर्ता भेटघाट तथा अन्य कार्यक्रमहरु केही नगरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो । प्रवक्ता खतिवडा पनि अध्यक्ष नेपालसँगै आउनुभएको थियो ।
सम्बेदना दिन संघिय सांसद सुरेश कुमार राई पनि आईपुगेका थिए । संघीय सांसद राई मलामी पनि गएका थिए । यस्तै सम्बेदना दिन प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्री राजेन्द्र राई पनि मेयर चौधरीका घर साँझ आइपुगेका थिए । उनले मृतक मनोजको तस्विरमा माल्य अर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीका साथै प्रदेश नं. १ का भौतिक विकास पूर्वाधार मन्त्री हिमाल कार्की पनि घरमै पुगेर सम्बेदना प्रकट गर्नुको साथै मलामी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
यस्तै नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश नं. १ का इन्चार्ज घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश सचिव महेश रेग्मी लगायत छिमेकी जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरुको मलामीका बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
मेयर चौधरीको छोराको निधन प्रति सिंगो नगरपालिका शोकमा डुवेका थिए । मेयर चौधरीको अकल्पनिय घटना प्रति नगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक विदा नै दिएको थियो । मेयर चौधरीको छोराको मलामीमा जनसागर उर्लिएको थियो । मेयर चौधरी कसैलाई नविजाउने नेता भएका हुनाले उनको छोराको मलामीमा सवै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा कार्यकर्ता, विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारी, उद्योगी, व्यपारी तथा छिमेकी नगरपालिका वा गाउँपालिकाका नेता कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
जारौको संख्यामा मलामी उर्लिएको थियो । मेयर चौधरीको छोराको क्रियापुत्री हजुरबुबा जगदेव चौधरी बसेका छन् । उनले नै मृतकको पार्थिव शरीरमा दागवति दिए । मृतकको अन्तेष्ठी त्रियुगा नदीमा गरिएको थियो ।